တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ညီလာခံ ချင်းမိုင်မြို့တွင် ကျင်းပ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေ အပါအ၀င် ပြည်တွင်း ပြည်ပမှာရှိတဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီ ခေါင်းဆောင်တွေ လူထုအခြေပြု အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ ပညာရှင်တချို့ပါဝင်တဲ့ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ညီလာခံတစ်ရပ်ကို ဒီကနေ့ စက်တင်ဘာ ၁၄ ရက်နေ့ကစပြီး ထိုင်းနိုင်ငံ ချင်းမိုင်မြို့မှာ ကျင်းပနေပါတယ်။
Very good for Unity , but Is Burmese notanation? Why no Burmese delegation? Oct 04, 2012 02:25 AM
တိုင်းရင်းသာလူငယ်များ ညီလာခံ တခုတော့ အိန္ဒိယမှာ မစ္ဇျိမ အယ်ဒီတာ ဦးစိုးမြင့်က ဦးစီးပြီး လုပ်ဆောင်ပြီးပါပြီ- စာအုပ်တောင် ထုတ်ထားသေးတယ်။ လိုချင်ရင် အယ်ဒီတာ ဦးစိုးမြင့် မစ္ဇျိမ ထံ မေးမြန်းတောင်ယူလို့ ရပါတယ်။ တကယ့်ပညာရှင်တွေ နဲ့ ဆွေးနွေးထားတဲ့ ဆွေးနွေးပွဲပါ။
Sep 15, 2012 01:58 AM